Maitiro ekukurumidza kuviga kana kuratidza mafaera mune macOS nechidimbu chebhodi | Ndinobva mac
Semutemo wakazara, masisitimu anoshanda anovanza akateedzana emafaira nechimwe chikonzero, izvo hazvisi zvimwe kunze kwekuyedza kudzivirira vashandisi kubva pakuvawana pamwe nehurongwa hwekushandisa kubva mukushatiswa, asi handicho chete chikonzero. Kana tichigovana Mac yedu nevamwe vanhu uye isu tisina sisitimu yekudzora mushandisi, isu tinogona kunge tichifarira kuviga mamwe mafaera.
Kana isu tichigara tichimanikidzwa kushanda nemhando idzi dzefaira, pamwe uneta nekushandisa iyo yepamusoro menyu kuviga uye kuratidza yakavanzwa system mafaira. Neraki, macOS inotipa mukana wekupinda kuburikidza nekubatanidzwa kwemakiyi kuti tikwanise kuvanza kana kuratidza aya marudzi emafaira.
Kuti tikwanise kushandisa nzira iyi, tinoda kopi yedu ye macOS kuti ienzane kana kukura kupfuura macOS Sierra, kuitira kuti chero vhezheni yepamusoro ienderane neiyi nzira pfupi yekhibhodi. Kana pfungwa yedu isiri yekuvanza mafaira kuitira kuti pasave neanowana, isu hatifanire kuedza kuwana aya marudzi emafaira, nekuti akachengeterwa vashandisi vemberi, sezvo sekutaura kwandataura pamusoro, chero shanduko inogona kukanganisa mashandiro edu timu.
Ratidza / Viga mafaira akavanzwa mu macOS
Senge chero kiyi yekubatanidza iyo inotibvumidza kururamisa basa rinowanikwa mumamenyu, kusangana kwemakiyi kunoda kumanikidzwa kwakateedzana kwemakiyi Shift + Command +.
Ehe, iko kusanganisa kwakakosha kunoda kuti tinyore mabhatani eShift, kiyi yeMirairo. uye poindi. Sezvo isu tichiita iwo musanganiswa wekukosha, mafaera ese akavanzwa muKutsvaga inozoratidzwa kana kuvanzwa zvichienderana nechinzvimbo mavari umo patinoitisa maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Maitiro ekukurumidza kuviga kana kuratidza mafaera paMacOS nekhibhodi pfupi
Apple inovandudza "Carpool Karaoke" uye pachave nemwaka wechipiri